အလင်းရောင်အတွက် အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားဆိုလာတဲ့ ဖွေးဖွေး | Duwun
အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ရင်း ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ (ဧပြီလ ၂၂ ရက်) မှာ မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် အလင်းရောင်အတွက် ဖွေးဖွေးက မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားတွေ ပြောထားပါတယ်။
ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့ကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသားချောလေး အလင်းရောင်ရဲ့ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့မှာ အနုပညာသူငယ်ချင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ အကယ်ဒမီ ဖွေးဖွေးက မွေးနေ့ဆုတောင်းစကား ဆိုထားပါတယ်။
" 22nd April, 2020 ဟက်ပီးဘတ်ဒေး အလင်းရောင် !! ပွဲတက်ပုံတွေ ရိုက်ကွင်းပုံတွေမတင်တော့ဘူး။ "ကံ့ကော်နီ"ရိုက်အပြီး ခွက်ပုန်းကစ်နေကြပုံလေးပဲ တင်လိုက်တယ်။ ခုလိုကာလမှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါမှမကြုံဘူးသေးတဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့အတူ အတွေးသစ်၊ စိတ်ကူးသစ်တွေ၊ တွေ့ချင်တာတွေ ထပ်တွေ့ပါစေ။ ALINNYAUNG Stay safe, wish you to be healthy & Happy & Good luck brother Light!" ဆိုပြီးတော့ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့ မနက် ၁၂ နာရီ ၄၂ မိနစ်က ဖွေးဖွေးရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်မှာ ဆုတောင်းပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အလင်းရောင် နဲ့ ဖွေးဖွေး တို့ဟာ "ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုဒ်" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ " ရွှေကြာ" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ " သမ္မတကြီးထံ ပေးစာ" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား နဲ့ "ပပဝတီ စီရင်ခန်း" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ အတူတွဲ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် TV ကြော်ငြာတွေလည်း အတူတွဲရိုက်ကူးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကလည်း အနုပညာအလုပ်တွေ အတူတူ လုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ ခင်မင်လာခဲ့ကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။